प्रधानमन्त्रीलाई बाढी पीडितको प्रश्न ‘हेलिकप्टरबाट हाम्रो भत्केको घर देखियो त ?' Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
प्रधानमन्त्रीलाई बाढी पीडितको प्रश्न ‘हेलिकप्टरबाट हाम्रो भत्केको घर देखियो त ?'
इटहरी : बाढी पहिरोले पारेको प्रभाव बुझ्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइतबार बिहानै सुनसरीको इटहरी आइपुगे। सुनसरीका बाढी र डुबान प्रभावितको अवस्थाबारे बुझ्न आएका देउवा सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय पकलीमा उत्रिए। मन्त्री र नेताहरूले घेरिएका उनी पहिल्यै हतारमा देखिएका थिए।
सशस्त्र प्रहरीको बदमासी : घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै कान्छी ल्याएर....
भेरीमा स्वास्थ्यकर्मी कुट्ने मुख्यमन्त्रीका 'विश्वासपात्र'
कालिज व्यवसायमा रमाएका तीन सरकारी जागिरे
कार्यक्रममा पनि निक्कै हडबडमा देखिएका उनले स्थानीय नेता र कार्यकर्तासँग भेट्न इच्छा गरेनन्। कोरोना महामारीको तर्क गरेर उनले कार्यकर्ताले लगाउन तयार पारेको माला र खादा समेत लगाएनन्।
डुबान प्रभावित जिल्लाको अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री देउवासँगै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङ सहभागी थिए।
प्रहरी र सरकारी अधिकारी मात्रै भएको भेलामा छोटो सम्बोधन गर्दै उनले 'विपत्ति ढोल बजाएर आउँदैन, अचानक आइदिन्छ, यसै कारण पनि नेपालमा अर्बौँको क्षति भएको' तर्क गरे।
उनले भने' म काठमाडौँ जानासाथ केही न केही घोषणा गर्छु।'
बाढी पीडितसँग भेटघाट र प्रभावित जिल्लाको अवस्थाबारे जानकारी लिने कार्यक्रममा सर्वसाधारण उपस्थित थिएनन्। देउवाले बाढी पीडितलाई नभेटी हेलिकप्टरबाटै प्रभावित क्षेत्र हेरेर फर्किए।
सुनसरीको जानकारी लिएर उनी इलामको कार्यक्रममा सहभागी भए। इलाममा पनि सरकारी अधिकारीसँगको भेटघाटमै अलमलिए उनी। पहाडमा अध्ययनविना जथाभाबी सडक र विकासका संरचनाहरू बनाउँदा क्षति पुगेको बताए। देशभरका पहाडमा जथाभाबी सडक बनाइएको र पहाडमा जतासुकै डोजर कुदाएर समस्या परेको उनको तर्क थियो।
उनी फेरि हेलिकप्टरमै फर्किए। प्रधानमन्त्रीले हेलिकप्टरमा बाढी प्रभावित क्षेत्र हेरेर फर्किएपछि पीडितहरूले चित्त दुखाएका छन्। उनीहरूले प्रश्न गरे'हेलिकप्टरबाट भत्किएको हाम्रो घर कसरी देखिन्छ?'
बाढीले घर बगाएपछि सुनसरीको इटहरी १३ का महेश सरदार घरबार विहीन भए। आफन्तको शरण लिँदै आएका उनलाई अहिले कहाँ बस्ने अनि के खानेको समस्या छ।
मजदुरी गरेर ७ जनाको परिवार पाल्दै आएका उनी घर बनाउने कि खानेकुरा किन्ने समस्यामा देखिए। प्रधानमन्त्री आएर बाढी हेरेर गएकोबारे उनलाई जानकारी रहेनछ। सरदार भत्किएको घर कसरी बनाउने भन्ने पिरलोमै देखिए।
'प्रधानमन्त्री हेलिकप्टरमा आउनुभयो होला। मैले देखिन। उनीहरूले पनि भत्किएको घर देखेनन् होला' उनले भने।
सुनसरीकै भोक्राह नरसिंह गाउँपालिकाका बसिर मिया दलको नाममा जनतालाई दुःख दिएको गुनासो गर्छन्। राप्रपाको नेताले काँग्रेसको भन्ने र काँग्रेसले राप्रपाको भनेर हरेक वर्ष बाढीमा डुब्नु परेको उनको भनाई छ।
मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले धेरै पटक हेरेर गएको तर गाउँको लागी केही पनि नगरेको उनले दुखेसो पोखे। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे जानकार उनी कोही आए पनि केही नहुने बताउँछन्। हेलिकप्टरबाट भत्किएको बाटो र घर नदेखिने भन्दै उनले काम नगर्ने नेताको विश्वास नलाग्ने बताए।
प्रदेश १ प्रहरीका अनुसार प्रदेश भरि बाढी र डुबान बाट ७१ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसमा महिला २७ र पुरुष ४४ जना रहेका छन् । प्रदेश भरि ६ जना अझै बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको प्रदेश भ्रमणमा भने कुनै पनि बाढी तथा डुबान पीडित सँग प्रत्यक्ष भेटघाट हुन सकेन।
२०७८ कात्तिक ०९ गते १६:५८ मा प्रकाशित
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश : लेखा समिति सभापति शाह पराजित, अमर पुन विजयी
२०७८ मंसिर २० गते ७:१७ मा प्रकाशित
सोमबार बिहान सम्पन्न मतगणना अनुसार पुनले ८ सय ५२ मत प्राप्त गरे भने शाहले ७ सय ६७ मत प्राप्त गरे। सभापतिमा विजयी पुन संस्थापनइतर पक्षका....
कांग्रेस गण्डकी प्रदेशमा संस्थापनइतरको प्यानल नै विजयी
२०७८ मंसिर १९ गते १३:३६ मा प्रकाशित
उनले संस्थापन समूहका अर्जुन जोशीलाई ८४ मतले पराजित गरेका छन्। ‘शर्मा विजयी हुनुभएको छ,’निर्वाचन अधिकृत कृष्णबहादुर थापाले उकेरासँग भने,‘घोषणा गर्न भने बाँकी छ।’ शर्माले ६१२....
बागमतीमा सिटौलाको समर्थन देउवालाई
२०७८ मंसिर १९ गते १२:४४ मा प्रकाशित
पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानले सभापतिमा बानियाँलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। सभापति चयनका लागि पहिलो र दोस्रो बढी मत ल्याउने बानियाँ र जगदिश्वनरसिंह केसीबीच दोस्रो....
कांग्रेस बागमतीमा बानियाँ र केसी भिड्ने, प्रधान आउट
२०७८ मंसिर १९ गते १०:५९ मा प्रकाशित
प्रदेश अधिवेशनमा सभापतिका तीन उम्मेदवार मध्ये पहिलो र दोस्रो मत प्राप्त गर्ने बानियाँ र केसी फेरि भिड्ने भएका हुन्। २ हजार ७१ मत मध्ये बानियाँले....
कांग्रेस कर्णालीको पदाधिकारीमा पनि संस्थापन पक्ष विजयी
२०७८ मंसिर १९ गते १०:३९ मा प्रकाशित
उप–सभापतिमा कालीबहादुर सहकारीले ४९७ र सनतकुमार कार्कीले ४४३ मत ल्याएर विजयी भएका छन्। यस्तै महामन्त्रीमा निरञ्जन केसीले ४२५ र कृष्ण रोकायले ४२३ मत ल्याएर विजयी....